inani lensimbi alikazinzile eChina
Intengo yensimbi ayikazinzile eChina, phezulu, phansi, phezulu, phansi… Izinga lokushintshana le-USD / RMB nalo alilihle, izinga liyi-6.44-6.46 namuhla. Izindleko zezinto zokusetshenziswa zomgwaqo onguthelawayeka zikhuphuka kancane, intengo yekhoyili yensimbi ehlanganisiwe iyafana nayizolo.Funda kabanzi »
Umthombo: Times Finance Umbhali: Yu Siyi Financial Times Muva nje, ukubongwa okuqhubekayo kwe-RMB kudale ukukhathazeka. NgoSepthemba 17, ukulingana okuphakathi kweRMB kuqhathaniswa nedola laseMelika kukhuphuke ngamaphuzu ayisisekelo ayi-150 aya ku-6.7675. NgoSepthemba 16, ukulingana okuphakathi kweRMB kuqhathaniswa nedola laseMelika kukhuphuke ngo ...Funda kabanzi »
Inkambiso yentengo yensimbi yaseChina ngoSepthemba 2020
1. Ukubuyekezwa Kwemakethe Ngo-Agasti 2020, intengo yensimbi yasekhaya yehla kancane. Kusukela ngo-Agasti 30, inkomba yentengo yensimbi ivalwe ngo-3940, okuyinyuka engama-50 kusukela ekupheleni kwenyanga edlule. Ngokukhethekile, ngo-Agasti, isimo sezulu esiqhubekayo sokushisa okuphezulu sanqoba ezweni lonke, ezansi nomfula ...Funda kabanzi »
I-Shandong Baimiao yakha umugqa omusha wokukhiqiza wophahla lwophahla lwensimbi lwe-FRP ngoJuni ka-2020 unyaka, ukukhiqizwa kwaminyaka yonke kungamamitha ayi-2,000,000, ikakhulukazi kukhiqiza ukwakheka kwamagagasi nesimo se-trapezoid, okusobala, okuguqukayo, okumibalabala. Izinzuzo ze FRP fiberglass roofing sheet: (1) Light transmitta ...Funda kabanzi »